Zazavavikely Iray 10 Taona Mandresy Lahatra ireo Hery Tandrefana Momba Ny Fandriampahalemana Ao Yemen · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Septambra 2016 3:13 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Deutsch, عربي, Ελληνικά, Italiano, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Yara, 10 taona, monina ao Sanaa. Maniry izy ny hitsaharan'ny herisetra ao, amin'izao fotoana izao.
Ity lahatsoratr'i Stephen Snyder ity dia naseho voalohany teo amin'ny PRI.org tamin'ny 6 Septambra 2016 teo. Naverina navoaka eto indray izy io mba ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Yara dia zazavavikely 10 taona monina ao Sanaa, tanàna ao Yemen eo ambany fifehezan'ny mpihoko. Ny feon'ireo fiaramanidina mpiady, ireo bala afomanga ary ireo fanafihana amin'ny baomba no tsy nahitany tory nandritra ny alina raha mbola vao valo taona sy tapany monja izy.
Vao haingana izay, nanapaka hevitra izy fa fotoana izao hanaovana zavatra. Noho izany nanao lahatsary iray izy.
“Tsy tiako ho anjarako indray no ho faty,” hoy izy, tao anaty hafatra iray nakàna feo azy tao an'efitrano fandriany teo amin'ny findain-dreniny. “Te-hiaina ny fiainako manontolo aho, te-ho lasa dokotera, te-ho lasa injeniera,” hoy izy manoloana ny fakàna sary. “Te-hitombo aho ary mba hisongadina eto amin'ity tontolo ity.”
Namporisika ireo ray amandreniny i Yara mba hizara ny lahatsary amin'ny YouTube, Twitter ary Facebook. Tao anatin'ny herinandro monja, voajery in-15.000 mahery io lahatsary io.
Nisy fitsaharana tapa-taona ireo ady tao Yémen mba hisian'ny fifampidinihana mikasika ny fandriampahalemana. Saingy tapaka ilay fifampiresahana nanomboka ny fiantombohan'ny volana Aogositra, ary nanomboka teo, saika ho andro aman'alina ny tanànan'i Yara no voadarok'ireo fiaramanidina mpiady avy amin'ireo firenena Arabo mpiara-dia tarihan'i Arabia Saodita. Ny mpiara-dia tarihan'i Saodi (ary tohanan'i Etazonia) dia mikatsaka ny hanapaka ny fifehzan'ireo mpihoko ny ao Sanaa ary hamerina ny filoha Yemenita lasa an-tsesitany, izay nakisak'ireo mpikomy.
Any amin'ireo faritra sasany ao Yémen, toa hafa ny endriky ny ady. Ao an-tanànan'i Taiz, ohatra, vondrona mpikomy iray Houthi izay mitantana ny tanàna nahaterahan'i Yara no heverina ho toy ny mpanao herisetra. Tohanan'i Arabia Saodita ireo mpiady ao an-toerana izay miaro ny tanàna hanoherana ireo Houthis.
Tena mafy, na ho an'ireo Yémenita aza, ny haminavina hoe tombontsoan'iza no arovana amin'ilay ady izay mihanaka manerana ny firenen'izy ireo. Amin'izao fotoana izao, manakaiky ny sivily 4.000 no maty tamin'ny ady. Ankizy avokoa ny 1.000 mahery amin'ireo.
Sahala amin'ireo mponina maro ao an-tanàna ahitana fikomiana, manameloka an'i Arabia Saodita nohon'ny fampitarazohany an'ilay ady i Yara, izay mamotika ireo trano fitsaboana, tsena ary sekoly.
Zarainy amin'ny fiteny anglisy ny hafatra amin'ny lahatsary. Izany no natao dia ny mba hahazoana mpijery marobe ao Angletera sy Etazonia – ireo izay, araka ny fijeriny azy, manana ny fanalahidy hampitsaharana ny fifandonana.
“Tiako raha hatsahatr'i Amerika ny fanampiana an'i [Saodiana], amin'izay mitsahatra ny ady,” “izany no nolazainy teo amin'ny tafatafa tamin'ny Skype nataony avy tao Sanaa. “Raha tsy vitan [ny Amerikàna] ny mampitsahatra ny ady atao amin'i Yémen, tiako raha atsahany ny fanampiana ny Saodiana ary ajanony ny fivarotana fitaovam-piadiana amin'izy ireo, amin'izay afaka hitsahatra ny ady.”
Nivarotan'i Etazonia fiaramanidina mitentina dolara an-dapitrisa maro, fitaovam-piadiana, tolotra samihafa ho fanohanana azy i Arabia Saodita ary ireo firenena hafa ao amin'ny Golfa. Hatramin'ny fanombohan'ny fanentanana fanjeràna baomba tao Yémen, nanampy ireo Saodiana tamin'ny fanmezana torohay momba ireo lasibatra ny mpiasa amerikana. Mandefa fiaramanidina mpitatitra solika izy ireo mba hamatsiana ireo fiaramanidina mpiady Saodiana eny an-tsefantsefan'ny fanjerana baomba eny. Ary manampy ny sambo Saodiana izy ireo amin'ny fibahanana ny morontsiraka any amin'ireo seranana ara-toekaren'i Yémen.
Yara, 10 taona, monina ao Sanaa. Maniry ny hitsaharan'ny herisetra ao, amin'izao fotoana izao.
Tadidin'i Yara ny fanombohan'ny fanafihana an'habakabaka, ny misasakalin'ny 26 Martsa 2015. Alina mialohan'ny hankalazan'ireo namany ny fifaranan'ny taom-pianarana tao amin'ny Sekoly Britanika tao Sanaa io. “Tena tsy andriko izay hanatrehana ilay fety”, hoy ny fitadidiany, “saingy, indrisy! nanomboka ny ady.”
Tsy nisokatra ny sekoliny ny ampitso maraina, na mety ho anatin'ny volana maromaro koa aza.
Hoy ny fitadidiany, “Nilaza tamiko ny reniko fa [efa] manomboka ny ady amelezana an'i Yemen, ary an-taonina ireo olona maty, sady very asa ny olona rehetra”. “Very asa koa ny raiko.”
Tsaroany ny fomba voalohany nandaminan'ny fianakaviany ny tontolo andro – sy ny alina – hifanaraka amin'ireo fanafihana an'habakabaka. “Natory tany amin'ny efitrano iray ambanin'ny tany avokoa izahay rehetra, ary efa vonona avokoa ny kitapo babena – misy vola, eny na dia ireo pasipaoronay aza.”
Mbola matory ao amin'ny efitrano ambanin'ny tany eo anilan'ny reniny, ny rainy ary ny anadahiny i Yara. Mipetraka eo anilan'izy ireo ihany koa ireo kitapo, sao mila miala haingana ny fianakaviana. Saingy fantatr'i Yara fa kely ny vintana ho an'ny fianakaviany handosirana ny ady. Manaraka maso fatratra ny faritra an'habakabaka, ireo seranantsambo sy ny sisintany lavabe ao Yemen iraisany amin'i Arabia Saodita ireo mpiara-dia tarihan'ny Saodiana.
“Tena nitomany isanandro aho milaza amin-dreniko foana fa te-handeha [ivelan'i Yémen],” hoy Yara, “saingy hoy izy tamiko, ‘Handeha ho aiza isika?’ Tsy afaka hiasa any amin'ny firenena hafa rainao satria Yemenita isika.’ Sady mihidy ireo masoivoho, noho izany, tsy misy fanomezan-dalana hivoaka… ary nakatona ny seranam-piaramanidina.”
Niaraka tamin'ny fikatonan'ny faritry ny habakabak'i Yémen, vitsy sisa ireo sidina ara-toekarena niditra sy nivoaka ny seranam-piaramanidin'i Sanaa. Ireo fiaramanidina mpiady sisa no hany sidina eny amin'ny lanitra manerana ny renivohitra.
Talohan'ny ady, mahazatra anay ny maheno ireo fiaramanidina ary miezaka ny handeha sy hisambotra azy ireo izahay,” hoy Yara. “Fa ankehitriny, rehefa vao mandre ireo fiaramanidina izahay, dia miala ary miafina”
Manantena ny mbola hiverina any an-tsekoly i Yara amin'ny vanimpotoanan'ny fararano amin'ny volana Oktobra.